Akhriso:-Amiirka Al-shabaab oo Ka Hadlay Duqeymaha Mareykanka iyo Dhacdadii Bariire | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Akhriso:-Amiirka Al-shabaab oo Ka Hadlay Duqeymaha Mareykanka iyo Dhacdadii Bariire
Akhriso:-Amiirka Al-shabaab oo Ka Hadlay Duqeymaha Mareykanka iyo Dhacdadii Bariire
Amiiirka guud ee Kooxda Al-Shabaab Sheekh Axmad Cumar Abu Cubaydah ayaa ka hadlay dagaalka Ciidamada AMISOM, iyo dadkii Ciidamada Mareykanka ku laayeen deegaanka Bariise ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Kalimada Sheekh Abu Cubayda Amiirka Al-shabaab oo ku baxaysa luqadda Soomaaliga, laguna turjumay Luqadaha English-ka iyo Sawaaxiliga ayuu uga hadlay marxaladda uu dalku marayo.
AMISOM Maxay Ka Dhaxashay Dagaalka 10 Sano Jirsaday?.
Mar uu soo hadal qaaday Dagaalka Ciidamada AMISOM ee galay sanadkii 10aad ayuu yiri:
“Waxaa inoo Muuqanaya Allaah fadligiisa in ay ahdaaftii loo soo igmaday ee ahaa burburinta ku dhaqanka shareecada Islaamka iyo ciribtirka Jihaadka iyo Al-shabaab ay ku hungoobeen una suurtagali weysay”.
“Duullaanku wuxuu dhaxalsiiyey hoog iyo halaag joogta ah, wuxuuna soo ifbixiyey kala duwanaanta ahdaaftooda siyaasadeed iyo damacooda gumeysi dhanka kalena wuxuu Allaah tacabkoodii ka dhigay mid Khasaaray.
Caga Jugleynta Lagu Hayo Ganacsatada Muqdisho.
“Tobankaas sano ee AMISOM dalka Joogeen waxay wadankakaga sugnaayeen deegaano kala duwan oo ay ugu weyntahay caasimada Muqdisho, Muqdisho waxay la noolaatay dulmi iyo darxumo midka ugu xun. Waxaa reer Muqdisho loo gacan geliyey shirkado shisheeye kuwaasoo la wareegay amniga iyo dhaqaalaha, wuxuu maanta xaalku marayaa in Dowladda Soomaliya uu u soo jeestay sidii uu ganacsatada reer Muqdisho ugala wareegi lahaa hantidooda ma guurtada ah iyagoo marmarsiiyo uga dhiganaya tagitaanka ganacsatadu ay tagaan deegaanada Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin goobaha ay Al-shabaab ka taliyaan.
Xasuuqii Mareykanka Uu Ka Geystay Bariire.
Mar uu soo hadal qaaday Xasuuqii Mareykanku ka geystay tuulada Bariire ee duleedka Muqdisho ayuu yiri:
“Waxaan rabaa in aan halkaan tacsi iyo sabarsiin uga diro eheladii iyo qoysaskii ay ka tageen dadkii Mareykanka iyo Ciidamada Dowladda Soomaliya ay ku xasuuqeen bishan aan ku jirno ee dulxijjah deegaanka Bariire. Xasuuqaan loo bareeray waxaa lagu dilay 10 ka mid ah dadyowga Muslimiinta oo deegaanka aad looga yaqaan. Waxaa ka mid ahaa dadka la laayey caruur iyo ganacsato beeraley ah kuwaas oo ku sugnaa beerahooda xilliga Mareykanku ay laaynayeen”.
Siyaasadda Cusub Ee Donald Trump
Mar uu soo hadalqaaday Xeerar Amni ee cusub ee dhawaan uu saxiixay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ka dhanka ah Muslimiinta ayuu yiri: “Duqeymaha Mareykanku la beegsado goobaha rayidka ayaa ah kuwa aanan ku cusbeyn dunida Muslimka ah, waana duqeymo ula kac ah oo uu caadeystay inta la ogyahay taariikhda. Duqeymahan arxan darada ah ee Mareykanka ku hayaan Umadeena ayaan ahayn kuwo intaan ku ekaan doona.Waxaana la wada ogsoon yahay go’aanadii foosha xumaa iyo xeerarkii Amni ee Trump saxiixay markuu xilka la wareegay.
“Reer Muqdisho waa in ay ogaadaan Mareykanku in uu ku jiro aargoosi salka ku hayo jabkii ka gaaray Soomaaliya, Wuxuuna u hamuun qabaa xasuuqa Umaddan, waxaana deeqi waayey kumanaankii ay diyaaradihiisu ku laayeen xaafadaha Muqdisho.Reer Muqdisho waxaan leenahay waan idiinla dareemeynaa culeyska la idinku hayo, waxa loo dan leeyahayna waa in la idiin gumeeyo ee gunta dhiisha isaga dhiga, Allaah gargaar weydiista.
Fariin Ku Wajahan Al-shabaab.
Mar uu la hadlayey ciidamada Al-Shabaab ayuu yiri:
“Waxaad maanta kor u sidaan waa Raayadii Nabigeena, waxaana rajeynayaa in aad ku taagan tihiin wadadiisii iyo hadyigiisii, waxaad u halgameysaana waa koryeelidda risaaladiisii, waxaad la dagaalameysaan waa cadowgiisii ee ha dhayalsanina muhiimada aad xaqiijineysaan.
Arimaha Umadda dhaawaca ah markasta qalbiga ku hayya, waxaadna ogaataan in aad tihiin jeyshkii u gurman lahaa muslimiinta Filistiin, waxaad sidoo kale gurmad iyo garab u tihiin walaalahiin Mujaahidiinta ah ee daafaha aduunka ka dagaalamaya”.